50 Best Oxford English Dictionary Ad Images in 2020 - BigSpy
Act Locally Waco – Enjoy Waco! Get involved!
My Study Box
សៀវភៅ Cliffs TOEFL Preparation Guide ល្អសម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស =============== វគ្គសិក្សា Intensive TOEFL Grammar Course TOEFL គឺជាការធ្វើតេស្តស្ដង់ដារអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកសិក្សា។ TOEFL ត្រូវបានស្ថាប័នជាច្រើនទទួលស្គាល់ ហើយតេស្ដនេះទៀតសោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការពេញនិយមផងដែរបើធៀបនឹងតេស្ត IELTS។ បើនិយាយអំពីតេស្ត TOEFL វេយ្យាករណ៍ (TOEFL Grammar)ត្រូវបានអ្នកសិក្សាជាច្រើនទទួលស្គាល់ជាយូរមកហើយ ហើយវាពិតជាផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់អ្នកសិក្សាផងដែរដើម្បីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសរសេរនិងប្រើប្រាស់ជាដើម។ ដើម្បីជួយដល់អ្នកសិក្សាបន្ថែមអំពីក្បួនវេយ្យាករណ៍ TOEFL Cam-Edu បានធ្វើការបង្កើតវគ្គសិក្សាមួយ Intensive TOEFL Grammar Course ដែលដកស្រង់មេរៀនពីសៀវភៅ TOEFL Preparation Guide ដែលជាសៀវភៅពេញនិយមខ្លាំងសម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស។ រយៈពេល៖ ០៨ សប្ដាហ៍ ថ្ងៃចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី31 សីហា ឆ្នាំ២០២០ ⌚ ម៉ោងសិក្សា៖ ថ្ងៃចន្ទដល់ព្រហស្បត្តិ៍ ម៉ោង៦៖០០ ដល់ ៧៖០០យប់ តម្លៃសិក្សាស្ដង់ដារ៖ ១០០ដុល្លារ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី៣១ សីហា៖ តម្លៃ ៧០ដុល្លារ (បូកវចនានុក្រមទូរស័ព្ទដៃ Oxford, Cambridge និងកម្មវិធីអនុវត្តតេស្ត TOEFL កុំព្យូទ័រ) #បញ្ជាក់៖ ការសិក្សាពីចម្ងាយនេះធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធី Zoom Meeting app ចំនួនសិស្សមានកំណត់ត្រឹមតែ១០នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្នាក់ #តម្រូវការ៖ - មានកម្រិតភាសាអង់គ្លេស Pre-Intermediate ឡើង - មានបំណងចង់សិក្សានិងបង្កើនសមត្ថភាពវេយ្យាករណ៍ TOEFL - ចូលចិត្តនិងចង់រៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេស - មានពេលវេលាធ្វើកិច្ចការផ្ទះនិងការងារដែលគ្រូដាក់ឲ្យជូន #ក្នុងវគ្គសិក្សានេះ សិស្សានិសិស្សនឹង៖ 1. យល់ដឹងអំពីភាពសំខាន់នៃក្បួនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស 2. សិក្សាអំពីក្បួនវេយ្យាករណ៍ TOEFL ដកស្រង់ពីសៀវភៅ TOEFL Preparation Guide 3. អនុវត្តការធ្វើលំហាត់ក្នុងមេរៀននីមួយៗ ៤. រៀនមើលនិងវិភាគក្បួនវេយ្យាករណ៍ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលំហាត់ 4. សិក្សាតាមដំណាក់កាលនីមួយៗអមជាមួយការអនុវត្ត 5. បង្កើតនសមត្ថភាពក្បួនវេយ្យាករណ៍និងការសរសេរ 6. រៀនដោយមានការហ្វឹកហាត់ក្នុងការសរសេរតាមដំណាក់កាលមួយៗ 8. ទទួលបានវចនានុក្រមភាសាអង់គ្លេស (Professional dictionary) ដូចជា Cambridge, Oxford) ដោយឥតគិតថ្លៃ 9.ទទួលបានកម្មវិធីអនុវត្ត TOEFL សម្រាប់កុំព្យូទ័រចំនួន២ ១០. ទទួលបាននូវឯកសារមេរៀនដែលចងក្រងទុកស្រេច 10. ទទូលបាននូវវិញ្ញាបនបត្រ័បញ្ជាក់ការសិក្សា (Certificate of Completion) 11. ទទូលបាននូវឯកសាររៀនជាច្រើនតាមរយៈ (Telegram / Group Messenger) 12. ពង្រឹងទៅលើជំនាញនៃការទំនាក់ទំនង (Communication Skills) 13. ទទួលបាននូវការផ្តល់ប្រឹក្សារហូត៕ Detail: https://bit.ly/3gjRgQj Register: https://bit.ly/2EaApTn ទំនាក់ទំនង៖ 096 35 45 925 / 061 54 53 ​42 =============== Intensive TOEFL Grammar Course In order to help English learners to enhance their grammar, Cam-Edu would like to introduce the Intensive TOEFL Grammar Course providing learners withagood opportunity to explore an in-depth understanding of the TOEFL grammar structures. On top of that, learners will be able to learn and acquire essential grammar points and good written structures. Through this course, you will also experience some mini-tests to measure your progress and ability. If you wish to score better and haveagood and exciting experience in the test, this course suits you the best. Duration: 8 weeks Starting date: 31 August 2020 Learning schedule: Mon - Thurs. When: 6:00 pm – 7:00 pm Where: Zoom Could Meetings app #Course Requirement • Pre-intermediate level of English proficiency • A willingness and strong commitment to study English grammar • An interest in TOEFL • Having time to complete some assigned tasks #Contents and Benefits: In this course, students will: 1. Know the importance of grammar; 2. Study TOEFL grammar structures; 3. Practice doing exercises to enhance the skills; 4. Learn to analyze grammar points 5. Study with step-by-step practice; 6. Improve grammar and written expressions; 7. Get three professional English dictionaries (Cambridge & Oxford); 8. Receive some computer programs to practice TOEFL tests; 9. Get files of the lessons; 10. Receiveacertificate of completion; 11. Get learning resources through Telegram and Messenger groups; 12. Strengthen communication skills; 13. Receive lifelong support. Detail: https://bit.ly/3gjRgQj Register: https://bit.ly/2EaApTn Contact: 096 35 45 925 / 061 54 53 ​42
#4_টি_ক্লাস_করার_পর_ক্লাস_ভালো_না_লাগলে_ফি_ফেরৎ!!!ভর্তি চলছে... #3_in_1_Spoken ও Job Writing_Grammar_and Translation কোর্সে ভর্তি চলছে। ক্লাস শুরু3in 1 Spoken আগামী 24 শে আগস্ট সোমবার সন্ধ্যা7টায় এবং Job Writing সকাল 11 টায়। কোর্স ফি 1530 টাকা। 12 বছরের অভিজ্ঞ মামুন স্যারের অনলাইন কোর্স দূর করবেই আপনার ইংরেজি ভাষা শেখার ভয়। গ্রামারের হাজার হাজার রুল দিয়ে নয় বরং একটা ছোট শিশু যেভাবে ভাষা শেখে ঠিক সেভাবেই ধরে ধরে বার বার বলিয়ে বলিয়ে আপনার ভাষা শেখার ভিত্তিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে। #মনে_রাখবেন... #শেখায়_শিক্ষক_কোন_প্রতিষ্ঠান_নয়! আগে ইউটিউবে মামুন স্যারের ক্লাস দেখুন তারপর ভর্তির সিদ্ধান্ত নিন। স্যারের ভিডিও দেখতে নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন... shorturl.at/nADL3 কোর্সের বিস্তারিত তথ্য: ⭕#3_in_1_SPOKEN (Speaking + Writing +Phonetics) ✅A B C থেকে শুরু করে IELTS Speaking পর্যন্ত ✅ মাত্র2টি ক্লাস করলেই Oxford/Cambridge এর প্রতিটি শব্দ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন ✅মনের মধ্যে থাকা যে কোন বিষয়েই বলতে ও লিখতে পারবেন ✅৪টি ক্লাস করার পর আপনিই অনেক বড় বাক্য তৈরী করতে পারবেন ✅অফিস বা ভার্সিটির যেকোন প্রেজেন্টেশন হবে মান সম্মত ✅ফ্রিল্যান্সিং এ কথোপকথনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে ✅আপনার সিভিতে ভাষাগত জ্ঞানের দক্ষতা যুক্ত হবে (আমরা কোর্স শেষে সরকার অনুমোদিত সাইন্স এ্যান্ড ইনফরমেশন কতৃক সার্টিফিকেইট প্রদান করি ) ✅ইংরেজি ভাষা শেখার ভিত্তি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী ✅নতুন এই কোর্সে থাকছে ইংরেজি পত্রিকা পড়ার জন্য A to Z Combined Vocabulary ✅মোট ক্লাস 24 টি,7টি Assignment এবং2টি Exam. ✅6মাস Language Club অর্থাৎ প্র্যাকটিস ক্লাস সপ্তাহে3দিন ক্লাব ও 1 দিন Problem Solving Class (যা অন্য প্রতিষ্ঠানে পাওয়া প্রায় অসম্ভব) ✅ক্লাস গুলো হবে ZOOM এর মাধ্যমে ✅প্রতিটি ক্লাস মামুন স্যার নিজেই নিবেন ✅ এই কোর্স করার মাধ্যমে #দুর_করুন_কথা_বলার_জড়তা, #তৈরি_করুন_উচ্চারণের_শুদ্ধতা #অর্জন_করুন_বড়_বড়_ইংরেজি_বাক্য_বলা_ও_লেখার_যোগ্যতা বি: দ্র:.. প্রতিটি ক্লাসের ভিডিও দেয়া হবে #ক্লাস6এ পড়া ছাত্র/ছাত্রী থেকে শুরু করে ছোট বড় যে কেউ এই কোর্সটিতে অংশ গ্রহন করতে পারবেন। #ফি: 1530 টাকা মাত্র..... ক্লাস শুরু 24 আগস্ট সন্ধ্যা 7টায় #এই_কোর্সে_ভর্তির _জন্য_এখানে_ক্লিক_করুন… shorturl.at/rtZ57 ⭕#JOB_Writing_Grammar_and_Translation ✅বড় বড় বাংলা বাক্যকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা ✅Advanced Grammar শেখানোর মাধ্যমে আপনার Writing এর ভিত্তি More Advanced করা ✅ বাংলা প্রত্রিকার সংবাদ ইংরেজি অনুবাদ করা শেখানো হয় ✅এই কোর্সেই Topic Based Grammar এবং Grammar Based Writing শেখানো হয় ✅এই কোর্সে রয়েছে মামুন স্যারের 12 বছরের সংগ্রহে লেখা A to Z Combined Vocabulary যা আর কোন প্রতিষ্ঠানের Writing Course Material দেখা যায় না। ✅বিগত বছরের বিভিন্ন চাকুরির পরিক্ষার প্রশ্ন ধরে ধরে সমাধান করা। ✅এই কোর্সটি তুলনামুলক একটু কঠিন কারন এখানো কোন ছোট বাক্যের অনুবাদ শেখানো হয় না... না... না.... *** যারা BANK/BCS সহ বিভিন্ন চাকরির পরিক্ষায় Written অংশে ভালো করতে চান তাদের মনে তৃপ্তি দেবেই এই কোর্সটি ইনশা আল্লাহ*** #ফি: 1530 টাকা মাত্র… মোট ক্লাস 22 টি, সপ্তাহে3দিন বি: দ্র:.. প্রতিটি ক্লাসের ভিডিও দেয়া হবে #এই_কোর্সে_ভর্তির _জন্য_এখানে_ক্লিক_করুন… shorturl.at/rtZ57 ⭕#Advanced_Spoken_and_Phonetics… ✅আমেরিকান/বৃটিশদের মত শুদ্ধ উচ্চারণে Fluently Speaking করতে শেখা ✅IELTS Speaking & Listening এ Desired Band Score Achieve করা ✅Public Speaking এ দক্ষ হওয়া ✅A to Z Practical Phonetics শেখা ✅A to Z Presentation & Anchoring শেখা ✅পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানুষের English Accent বোঝা ✅News Presenter দের মত ইংরেজি পড়তে শেখা ✅Topic Based Less Common Vocabulary with Collocation শেখানো ✅Smart Expressions শেখা ✅English Movie দেখে ও Song শুনে বোঝার টেকনিক শেখা ✅Oxford/Cambridge Dictionary এর প্রতিটি শব্দ নিজে নিজেই American / British Pronunciation এ উচ্চারণ করতে পারবেন (মাত্র2টি ক্লাস করার পর) ✅শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য বাক যন্ত্রগুলোকে ফ্রি করার জন্য Outstanding Mouth Muscle Exercises শেখা ✅IELTS Speaking এর A to Z শেখা হবে এই কোর্সেই ✅6মাস Language Club অর্থাৎ প্র্যাকটিস ক্লাস সপ্তাহে3দিন ক্লাব ও 1 দিন Problem Solving Class (যা অন্য প্রতিষ্ঠানে পাওয়া প্রায় অসম্ভব) *** যারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন তাদের জন্যই এই কোর্স*** #ফি: 1530 টাকা মাত্র… ⭕#IELTS বিদেশে উচ্চ শিক্ষা এবং ইমিগ্রেশন এর জন্য IELTS-ই হল মুলচাবি। আমার মতে IELTS না করে বিদেশ যাওয়া তুলনামুলক কম জ্ঞানী মানুষের কাজ। আমাদের এখানে….. ✅একেবারে হাতে খড়ি থেকে IELTS ক্লাস নেওয়া হয় ✅প্রতিটি Module এর উপর প্রশ্ন ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা ও
According to The Oxford Dictionary, “Plagiarism is the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own." The consequences of plagiarism range from failing an assignment, to expulsion, rejected applications, or even legal charges. Many students and professionals are at risk of plagiarizing because they do not know how to properly reference the ideas of others within their own work. This virtual presentation will teach you how to avoid plagiarism when writing essays, applications, or academic articles in English. Join us on Zoom: https://amideast.zoom.us/j/98222952708?pwd=RUNmZXhwditwZ2NDT2psbDN0YVA3QT09 Meeting ID: 982 2295 2708 Password: 015939
The phrase ‘Top Bin’ has OFFICIALLY been added to the Oxford English dictionary! , . .: “ ; () .”
English စကားလုံး ၊ အသုံးအနှုန်း အသစ်တွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိ အသုံးချနိုင်အောင် ဘယ်လို လေ့လာရမလဲ ? စကားလုံး ၊ အသုံးအနှုန်း အသစ်တွေ ဒီနေ့ သင်လိုက် ၊ နောက်နေ့ ပြန်မေ့သွားလို့ ပြန်သင်ရလိုက် ၊ နောက်တော့ ရသွားပေမယ့် နည်းနည်းကြာတော့ ပြန်မေ့သွားလိုက် ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ချစ်တပည့်တွေ အတွက် Collins ရဲ့ Guidelines တွေကနေ မှီငြမ်း ဖြည့်စွက် ပြီး ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အခြား English ဘာသာစကားလေ့လာသူတွေ အတွက်လည်း အကျိုးရှိမယ် လို့ ထင်လို့ အွန်လိုင်းမှာပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ... ကိုယ်ဖတ်ပြီးလို့ တခြား မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို သိစေချင်ရင်လည်း ထပ်ဆင့် မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ ... ♦ 1. စကားလုံးတွေကို လေ့လာမှတ်သားတဲ့ အခါမှာ အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ သတိမထားမိဆုံး ဖြစ်နေတတ်တဲ့ အချက်ကနေ စ ပါရစေ ။ ( ဦး ပေါ်ဦး လေသံနဲ့ ပြောရရင် ... ) သူ့ချည်းပဲလား ? ဥပမာ ဝါကျ လေးနဲ့ပါ ဘုရား ? :D စကားလုံးတွေကို သူ့ချည်းသက်သက် မမှတ်ဘဲ ဥပမာ စာစု ၊ စကားစု ၊ ဝါကျ တွေနဲ့ တွဲပြီးမှတ်သားပါ ။ ဒါမှ ကိုယ် တကယ် အသုံးချတဲ့ အခါ မှန်ကန်တဲ့ အတွဲအစပ်တွေ ထွက်လာမှာပါ ။ မဟုတ်ရင် Native Speakers တွေ နားမလည်တဲ့ ၊ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ မြန်မာဟန် English စကားတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ် ။ ပြီးတော့ အတွဲအစပ်တွေ မှားနိုင်ပါတယ် ။ He isabeautiful man. ( Not beautiful , Handsome ) She isahigh girl. ( Not high , Tall ) I go to job . ( Not job , Work ) ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ ။ :) ♦ 2. ကိုယ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး သုံးကြည့်ပါ ။ စကားလုံး အသစ် တစ်လုံး (ဒါမှမဟုတ်) အသုံးအနှုန်း အသစ်တစ်ခုကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ ဒီစကားလုံးတွေကို အသုံးချပြီး ကိုယ့်အကြောင်း ( ဒါမှမဟုတ် ) ကိုယ်သိတဲ့ လူတွေ ၊ နေရာတွေအကြောင်းကို ဥပမာ အချို့သုံးပြီး ချရေးကြည့်ပါ ။ ( အပြောလေ့ကျင့်တာဆိုရင် ထုတ်ပြောကြည့်ပါ ) ဥပမာ " gorgeous " ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို လေ့လာမယ်ဆိုပါစို့ ။ သူရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်က - " extremely beautiful or attractive " ပါ ။ ဒီတော့ အလွန့်အလွန်ကို လှပသော ၊ ဆွဲဆောင်မှု ရှိသော လို့ အရင်မှတ်လိုက်ပေါ့ ။ ( Level အတန်အသင့်ရှိနေပြီးသူတွေကတော့ English လိုပဲ တိုက်ရိုက် မှတ်ပါ ။ ) ပြီးရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က အလွန့်အလွန်ကို လှတဲ့ ၊ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ယောက် ( ဒါမှမဟုတ် ) မော်ဒယ် ၊ မင်းသမီး ၊ အဆိုတော် တစ်ယောက်ယောက်ကို အသုံးချပြီး စာကြောင်းလုပ်လိုက်ပါ ။ ဥပမာ " Taylor swift is gorgeous. " ဆိုတာမျိုးပေါ့ ။ ဒါဆို ကို ပြန်စဉ်းစားတာနဲ့ Taylor swift မျက်နှာလေး ပြေးမြင်တော့ ပိုမှတ်မိတာပေါ့ ။ ;) ကိုယ့် အကြိုက်ပေါ်လိုက်ပြီး " Angelina Jolie is gorgeous. " လည်း ပြောချင်ပြောလို့ရတာပါပဲ ။ ( မြန်မာ မင်းသမီးတွေ ထည့်ချင်လည်း ထည့်နော် ။ အားမနာနဲ့ ။ ) :D ♦ 3. သတိထားပါ ။ English လို ဖတ်နေသမျှ ၊ ကြားနေ နားထောင်နေသမျှ အရာရာတိုင်းမှာ ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ စကားလုံးအသစ်တွေရဲ့ ဥပမာအချို့ ပါနေပါလိမ့်မယ် ။ ဒီ ဥပမာတွေကို သတိထားမိအောင် ကြိုးစားပါ ။ ပြီးရင် သေချာလေ့လာမှတ်သားနိုင်ဖို့အတွက် အဲ့ဒီ ဥပမာတွေထဲက တစ်ချို့ကို မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ ရေးချထားပါ ။ ♦ 4. တွေးရုံပဲ မတွေးဘဲနဲ့ ပါးစပ်ကနေပါ ထုတ်ပြောပါ ။ စကားလုံးတွေကို အသံကျယ်ကျယ်ထွက်ပြီး အပြော လေ့ကျင့်ပါ ။ ဒါဆို ပိုပြီး မှတ်မိနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ လူတွေ သင့်ကို သေချာ နားလည် ဖို့ အတွက် အသံထွက်မှန်ကန်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတယ် ဆိုတာ သတိရပါ ။ အသံထွက်အမှန် သိရဖို့က Phonetics သင်ချင်လည်းသင် ၊ ဒါမှမဟုတ် ရင် အသံထွက် Dictionary ကောင်းကောင်းလေး တစ်ခုလောက် ဆောင်ထားလိုက်ပေါ့ ။ Oxford , Cambridge , Longman , MacMillan စတာတွေ ထဲက ကြိုက်တာသုံးပါ ။ သတိထားရမှာ တစ်ခုက တစ်ချို့ Mobile Dictionary တွေက ဖုန်းထဲက Text-to-Speech Engine နဲ့ အလုပ်လုပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူသံ မပေါက်ဘဲ စက် သံ ပေါက်နေတတ်တယ် ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒါမျိုးကိုမသုံးဘဲ လူသံ နဲ့ ပြောထုတ်ပေးတဲ့ Mobile Dictionary ကို သုံးပါ ။ #ActiveEnglish သင်တန်းသားတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ Longman Dictionary ကို သုံးလိုက်ပေါ့ ။ :) ♦ 5. နေရာ တကာမှာ လေ့လာပါ ။ ကိုယ့်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်ကို ကိုယ်နဲ့ အမြဲ ယူသွားပါ ။ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းကို စောင့်နေရတာမျိုး ၊ Bus စောင့်နေရတာမျိုး အချိန်ပိုလေးတွေကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချပါ ။ ကိုယ့် မှတ်စုတွေကို ပြန်ဖတ် ၊ ပြန်နွှေးပါ ။ Topic တစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်လို့သင့်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ ဘာတွေမှတ်မိနေသလဲ ? ဒါတွေကို တွေးထုတ်ပြီး ပြန်နွှေးပါ ။ ( ဥပမာ ကားဂိတ် ရောက်နေရင် ကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်သိတဲ့ စကားလုံးတွေ ၊ အသုံးအနှုန်းတွေကို ပြန်တွေးထုတ်ကြည့်ပါ ။ ) အဲလို ဟိုနား နည်းနည်း ဒီနား နည်းနည်း ကြုံရင် ကြုံသလို လေ့လာတာကလည်း သင့်ရဲ့ သင်ယူမှု ဖြစ်စဉ်မှာ အထောက်အကူ ကောင်းကောင်းပြုပေးမှာပါ ။ ♦ 6. ပိုပြီး နက်နက်နဲနဲ ၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာပါ ။ စာအုပ် ၊ သင်ရိုး ထဲမှာ ပါတဲ့ ဥပမာလေးတွေကိုပဲ လေ့လာမနေပါနဲ့ ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဥပမာတွေကို ဖန်တီးကြည့်ပြီးလည်း လေ့လာပါ ။ (
Active English သင္တန္း - ကိုဇင္ေဇ
သင်တန်း စဖွင့်ကတည်းက လုပ်ပေးမယ် လုပ်ပေးမယ် လို့ စဉ်းစားထားပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မလုပ်ပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စေလး တစ်ခု စပြီး စီစဉ်ပေးပါတော့မယ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အားနည်း သူတွေ အတွက် လုံးဝ အခြေခံ တန်း ဖွင့်ပေးပါမယ် ။ ❗️လုံးဝ အခြေခံ ❗️တန်းပါ ။ ( 4.2.2020 မှာ စ ဖွင့်ပါမယ် ) ABCD က တောင် ပြန်သင်ချင်တယ် ဆရာရယ်လို့ ညည်းလေ့ရှိတဲ့ လူတွေ အတွက် ၊ အင်္ဂလိပ် စကားလုံး ၅၀၀ တောင် ပြည့်အောင်တောင် သေချာ မသိတဲ့လူတွေအတွက် ၊ သားသမီး အငယ်လေးတွေရှေ့မှာ ရဲရဲ မဖတ်ရဲ မပြောရဲလောက်အောင် ခံစားနေရတဲ့ လူလတ်ပိုင်း မိဘ တစ်ချို့အတွက် ဦးစားပေးပြီး ရည်ရွယ်ဖွင့်ပေးတာပါ Foundation - 1 , Foundation -2ဆိုပြီး Level ၂ ခုတော့ ပြန်ခွဲပေးပါမယ် ။ ❗️❗️❗️ ဒီ သင်တန်း Level - ၂ ခု ပြီးသွားရင် အင်္ဂလိပ်စာ အခြေအနေ ဆိုးလွန်းလို့ လူကြားထဲ အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ရ ပြောရမှာမျိုး ကြုံလာမှာကို အကြောက်လွန်နေမိတာ ၊ အင်္ဂလိပ်စာ စ လေ့လာဖို့တောင် လူသိ မခံရဲ ဖြစ်နေတာ ၊ ဘယ် သင်တန်းကိုမှ ဝင် မတက်ရဲ ဖြစ်နေတာတွေ ပျောက်သွားစေဖို့ ကျွန်တော့်ဘက်က သေချာ သင်ပေးသွားပါ့မယ် ။ သင်တန်းသားဘက်ကလည်း " နှေးရင်သာ နှေးမယ် ၊ ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်ဘူး " ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ ကျွန်တော် သင်ပေးတဲ့ အတိုင်း သေချာ လိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် ။ ( သေချာတော့ လိုက်လုပ်ရမှာနော် ) Foundation - 1 မှာ စကားလုံး ၁၅၀၀ လောက်ကို အပိုင်ရအောင် သင်ပေး ကျင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး Foundation -2မှာ စကားလုံး ၂၅၀၀ - ၃၀၀၀ လောက်ကို အပိုင်ရအောင် သင်ပေး ကျင့်ပေးမှာပါ ။ အဲ့ဒီ စကားလုံးတွေကို ကြုံသလို သင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ နိုင်ငံတကာက သုတေသန တွေ အရ ( စနစ်တကျ ထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ ) အသုံး အများဆုံး ၊ အတွေ့ရ အများဆုံးတွေကို ဦးစားပေး သင်ပေးသွားမှာပါ ။ ခု တွဲတင်ပေးလိုက်တဲ့ Video ကို ကြည့်လိုက်ရင် အဲ့ဒီ စကားလုံးတွေရဲ့ အရေးပါပုံကို ပိုပြီး သိနိုင်ပါမယ် ။ အတော်များများက Oxford / Cambridge စတာတွေက ထုတ်ပေးထားတဲ့ Vocabulary Lists တွေကို သုံးပေမယ့် ကျွန်တော်က Longman က ထုတ်ပေးထားတဲ့ Vocabulary list ကို သုံးပါမယ် ။ ဘာကြောင့်ဆိုတာ သင်ရင်းနဲ့မှ ပဲ ရှင်းပြပါမယ် ။ ဒီမှာရှင်းရင် စာ ပိုရှည်သွားမှာစိုးလို့ ပါ ။ စကားလုံးတိုင်းရဲ့ အသုံးအနှုန်း အကုန်တော့ သင်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အခြေခံ အဆင့်မှာ သိထား ပိုင်ထား သင့်တဲ့ အသုံးတွေကို ဦးစားပေး သင်ပေး ကျင့်ပေးမှာပါ ။ ( အသုံးအနှုန်း အကုန် သိချင်ရင်က Dictionary မှာ သွားကြည့်ရုံပဲလေ ။ ပိုသိချင်ရင် Google မှာ ထပ်မွှေပေါ့ ။ သာမန် Dictionary တွေမှာ မပါတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေလည်း ရှိနိုင်တာကိုး ။ ) အဲ့လို English Dictionary တွေ Google ( Search Engine ) တွေကို သုံးပြီး ရှာနိုင်ဖတ်နိုင်လောက်တဲ့ အဆင့် မရောက်သေးသူတွေ ၊ ကိုယ့်ဘာသာ လေ့လာမှု မလုပ်ရဲ မလုပ်တတ်သေးသူတွေကို ... ကိုယ့်ဘာသာ လေ့လာမှု လုပ်ရဲ လုပ်တတ်သွားအောင် အကျင့် လုပ်ပေးချင်လို့ အခြေခိုင်အောင် လုပ်ပေးချင်လို့ ဒီ Foundation သင်တန်းကို ဖွင့်တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခု သင်ပေးမယ့် ပုံစံအရ စကားလုံး ၁၅၀၀ လောက် တကယ် ပိုင်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ထားလိုက်ရင် အသုံးအနှုန်း ၄၅၀၀ ကနေ ၇၅၀၀ လောက်ထိ သိနိုင် သုံးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ် ။ စကားလုံး ၁ လုံးကို အသုံးအနှုန်း ၃-၄-၅ မျိုး နဲ့ ပျမ်းမျှ တွက်ပြတာပါ ။ ( စကားလုံး ၁ လုံးတိုင်းကို Dictionary ကောင်းတွေမှာ ပါသလောက် အသုံးအနှုန်း အကုန် သင်လိုက်ရင်လည်း အခြေခံ အဆင့်မှာ ရူးထွက်သွားနိုင်တယ် ဥပမာ - " like " တစ်လုံးတည်း ကိုတင် အသုံး အနှုန်း ၂၀ ကနေ ၅၀-၁၀၀ လောက် အထိ ချဲ့သင်လို့ ရတာကိုး ။ ဒီ Foundation သင်ရိုးမှာ ... အခြေခံ စာကြောင်း တည်ဆောက်ပုံ ၆ မျိုး ကနေ အမျိုး ၃၀ လောက်ကို ပွားယူတတ်အောင်လည်း သင်ပေးပါမယ် ။ ဒီတော့ တကယ်လိုက်ကြိုးစားရင် စကားလုံး ၁၅၀၀ လောက္ကို အသုံးခ်ျပီး စာကြောင်းပေါင်း သောင်းချီ ရေးနိုင် ပြောနိုင်သွားပါလိမ့်မယ် ။ တကယ် လိုက်ကြိုးစားဖို့တော့ လိုပါတယ် ။ သင်ခန်းစာ Videos တွေ ဝင် ဝင် ကြည့်နေရုံပဲ ရှိပြီး တကယ် လိုက် ပြော လိုက် ရေး မကျင့်ဖြစ်ရင်တော့ ထိုက်သင့်သလောက် မရနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ ။ Speaking လိုက် လေ့ကျင့်မယ်ဆို လေ့ကျင့်လို့ရအောင် စီစဉ် သင်ပေးသွားမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က လူအများကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ စနစ်တကျ သင်ပေးလို့ရတဲ့ စနစ်ကောင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ အားသန်တာမို့လို့ တစ်ဦးချင်း ကို အပြန်အလှန် တစ်ယောက်ချင်း စကားပြောပေး ၊ သီးသန့် စာစစ်ပေးတာမျိုးတော့ လုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အဲ့လို တစ်ဦးချင်း ဂရုစိုက်ခံရတာမျိုးမှ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီသင်တန်းနဲ့ လုံးဝ မကိုက်ပါဘူး ။ ဖြေပြီးတာနဲ့ မှန် ၊ မှား တန်းသိရမယ့် နည်းပညာ မျိုး သုံးထားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးတွေ ၊ စံ အဖြေ တစ်မျိုးတည်း ရှိနိုင်တဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ နဲ့ ဦးစားပေး လေ့ကျင့် စစ်ဆေးပေးမှာပါ ။ ကိုယ်ပိုင် အဖြေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးလို့ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးမှာတော့ တစ်ယောက်ချင်းကို အမှားလိုက်စစ်ပြီး ပြန်ပြင်ပေးတာမျိုး လုပ်မပေးပဲ အများစု ဘာတွေမှားလေ့ရှိတယ် ၊ ဘာတွေ သတိထားပါဆိုတာမျိုးပဲ
Emily clinic เอมิลี่คลินิกขอนแก่น เสริมจมูก เสริมคาง ปรับรูปหน้า
Zestaw do usuwania rys z nadwozia
ดูแลสุขภาพด้วย กรีน เคอมิน สั่งเร็ว ส่งไว เหมือนติดปีก ส่งความสวยถึงคุณลูกค้าที่น่ารัก ออเดอร์รั่วๆ สต็อกแน่น ออเดอร์เพียบ กรีนเคอมินสมุนไพรออแกนิกแท้ % เห็นผลในกล่องแรกที่ทาน ‼️ ท้องอืด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย จุกแน่นลิ้นปี่ เรอบ่อย หายใจเหนื่อย แสบร้อนกลางอก Green Curmin 1 กล่อง บรรจุ 30 แคปซูล Curma Max 1 กล่อง มี6ขวด ✅ #สินค้าสมุนไพรไทยเรารักษาหายขาดได้ #ปลอดภัยไร้สารตกค้าง #คุณภาพเหรียญทองระดับโลก ✅ มี อย. ปลอดภัยค่ะ ☎️ 089-496 5442 LINE@ : @dr.curmin (อย่าลืมใส่ @ นะคะ) หรือคลิกแอดไลน์ http://bit.ly/2ICgCfE Inbox คลิ๊ก : m.me/greencurmin1
Pollería El Leñador RJ Chorrillos
Θα ήθελες μια υπέρ ελαφριά mirrorless μηχανή πλήρους καρέ; Μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μια Canon EOS RP: https://canon.sm/2U5enTV #canongreece #liveforthestory
ขายที่ดินเปล่า 14 ไร่.... ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย (เจ้าของขายเอง).. #ขายที่เปล่า..สุโขทัย .. #ที่ดินติดถนน AEC(ตาก-พิษณุโลก) 14 ไร่ ถมดินแล้วบางส่วน ด้านหน้า หน้ากว้าง ประมาณ 70 เมตร ลึก 380 เมตร เหมาะสร้างปั้มน้ำมัน รีสอร์ท ทำการเกตรยุคใหม่ หรือ ซื้อไว้เก็งกำไร ได้จ้า..... พิกัด : https://goo.gl/maps/4zSR6Qev8FUdVVqq5 ราคา 19,500,000 บาท... #เจ้าของขายเอง ไม่ผ่านนายหน้า ราคานี้เลย... ☎ สอบถามเพิ่มเติม 081-9712171 (ปัท) Thank You!
Optimus Prime Mpp10 Mp10V Soundwave Dinoking Grimlock | ECS-Direct
50 Best Online Shops Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Oshawott Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Oscillating Tool Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Odor Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Occhi Ad Images in 2020 - BigSpy
50 Best Outdoor Rug Ad Images in 2020 - BigSpy